Issue3Narratives: Lost and Found — 3-ACT Film
About 3-ACT Cinema Magazine Articles News/ Events Shop Subscribe
About3-ACT Cinema MagazineArticlesNews/ EventsShop
(NARRATIVES: LOST AND FOUND)
Interior of Issue3Narratives: Lost and Found
ISSUE3- Narratives: Lost and found
The special feature of Issue3ACT-1 falls under the theme “Narratives: Lost and Found” which isafocus on the preservation and restoration of films in Myanmar. It highlightsadetailed reported article on the Myanmar cinema legacy reflected from the film reels and the importance of the reflection of our society though film heritage. It digs through Myanmar films that had been lost and unknown in this modern day world to discover the narratives of the country.
Apart from these special articles, we continue to have our usual Myanmar films analysis. Under ACT-2 holds articles about the art direction of “Mie” film, an accounted diary of Asia Film Academy (AFA) and an exploration of sound design in films. Under ACT-3, we wrote about the directorial trait of Vietnamese Director Tran Anh Hung followed by an interview with him, continued to include the third part of film history (coming of sound and color) and explored other forms of cinematic languages.
Issue3ရဲ့ Special Feature မှာ "တူးဖော်ရရှိသောအတိတ်မှ ဇာတ်လမ်းများ" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ရုပ်ရှင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ဖလင်လိပ်တွေမှတဆင့် မြန်မာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ကိုတူးဖော်ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပြီး ယခုခတ်မှာ ပျောက်ဆုံးသတိထားခြင်းမခံရသော ရုပ်ရှင်များမှတဆင့် နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာ့ရုပ်ရှင်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဝေဖန်ထားပါတယ်။ ACT-2 အောက်မှာတော့ မီရုပ်ရှင်၏ အဝတ်အစားနှင့်ဆက်တင်အပြင်အဆင်၊ Asia Film Academy (AFA) ကိုတတ်ရောက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ Sound Design အနုပညာကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ACT-3 အောက်မှာတော့ ဗီယက်နမ်ဒါရိုက်တာ Tran Anh Hung ရဲ့လက္ခဏာကိုသုံးသပ်ထားပြီး 3-ACT မှသူ့ကို အင်တာဗျူးထားသောဆောင်းပါး၊ ရုပ်ရှင်သမိုင်း (အသံနဲ့အရောင်ဝင်ရောက်လာပုံ) နှင့် အခြားသောရုပ်ရှင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေပါဝင်ပါတယ်။
Guest Writers: Tin Htet Paing, Aung Phyoe, Thaiddhi, M. Noe, San Yae Aye, Aung Htet, Slyne, Moe Myat May Zarchi
Issue2Through Her Lens Key Visual
Issue3Narratives: Lost and Found